Battle News – Northern Alliance (Burma)
Tag: Battle News
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇/၂၈/၂၉)ရက် တိုက်ပွဲသတင်းများ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇/၂၈/၂၉)ရက် တိုက်ပွဲသတင်းများ (၁)၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉) နာရီအချိန်တွင် တနိုင်းချောင်းနှင့် နမ်ကွမ်းချောင်းဆုံရှိ KIA အကောက်ခွန်ဂိတ်အား ဗမာနယ်ချဲ့ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူတပ်မှ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် အလစ်အငိုက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ (၂)ထို့ကြောင့် ၎င်းဂိတ်ရှိ မိမိတို့ရဲဘော်(၅) ဦးနှင့်၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရပ်သား(၅) ဦး၊ စုစုပေါင်းဆယ်ဦးအား အရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော်လည်း Prisoner of War (POW) အား ဗြောင်ကျကျချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အပြင် ၎င်းတို့အား ဗမာစစ်တပ်မှ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ မိမိတို့ဖက်မှလက်နက်ငယ်(၅)လက် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
Battle News- May 11, 2017
Battle News- May 11, 2017 1. On 11 May 2017, the Burma Army has ceaselessly carried out mortars and artillery shelling towards our posts in Hone-ai region like the same as past days beginning at7AM. 2. Although the Burma Army had not launched ground combats in the past days, today they have […]